Yangu Apple Watch Haizoshanduke! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Apple Tarisa
ndinoteedzera sei meseji pane iphone
iphone 4s haina kudzima
chitoro cheapp chisiri kushanda ios 11
iphone haigone kumutsiridza maapp
nei yangu iphone 6 yekugadzirisa
Yangu Apple Watch Haizoshanduke! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Yako Apple Watch haisi kutendeuka uye iwe hauzive nei. Uri kudzvanya uye wakabata Side bhatani, asi hapana chiri kuitika! Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura kuti nei Apple Watch yako isingabatike uye ikuratidze maitiro ekugadzirisa dambudziko iri zvakanaka .
Zvakaoma Reset Yako Apple Tarisa
Chinhu chekutanga chekuita kana yako Apple Watch isingashanduke kuita yakaoma reset. Panguva imwe chete bata uye ubatisise iyo Dhijitari Korona uye Bhatani bhatani kweanenge 10-15 masekondi. Kana iyo logo yeApple ikaonekwa pane yako Apple Watch, sunungura mabhatani ese ari maviri. Yako Apple Watch inodzoka shure nguva pfupi yapfuura.
Ongorora: Dzimwe nguva, ungatofanira kubata mabhatani ese masekondi makumi maviri kana kupfuura!
Kana iyo yakaoma reset yakagadzirisa yako Apple Watch, heino chikonzero: software yayo yakarovera, ichiita iyo kuratidza kuoneka nhema. Muchokwadi, yako Apple Watch yaive pane iyo nguva yese!
Ita Kuti Simba Rokuchengetera Simba Risina Kuvhurika
Kana vanhu vatsva vawana yavo yekutanga Apple Watch, ivo vanombozoisa muPower Reserve mode uye vofunga kuti yavo Apple Watch haisi kutendeuka. Pandakatanga kutora yangu Apple Watch, ini ndaitamba ndichitenderedza nechinhu ichi uye ndichifunga zvakafanana!
ipad isingabatanidze kune wifi zvekare
Power Reserve chinhu chinowedzera hupenyu hwebhatiri hweApple Watch nekuremadza zvimwe zvese zvaro kunze kwenguva iripo. Iwe uchaziva Power Reserve yakavhurwa kana ichitaridzika semufananidzo pazasi:
Kana yako Apple Watch iri muPower Reserve mode, tinya uye ubatise Rutivi bhatani kusvikira iwe waona iyo Apple logo ichioneka pachiratidziri. Kana yako Apple Watch yadzokazve, inenge isisipo muPower Reserve mode.
Bvisa VoiceOver uye Screen Curtain
Chimwe chezvinhu zvisingazivikanwe pane yako Apple Watch iScreen Curtain, iyo inodzima skrini yeApple Watch yako kunyange kana yako Apple Watch ikavhurwa. Kana Screen Curtain yashandurwa, unongokwanisa chete kufamba neApple Watch yako uchishandisa VoiceOver.
Kuti udzime Screen Curtain, vhura iyo Watch app pane yako iPhone uye tinya Zvakajairika -> Kupinda -> VoiceOver . Wobva wadzima switch iripedyo ne Chidzitiro Chidzitiro . Iwe uchaziva kuti switch yakadzimwa kana yaiswa kuruboshwe.
nekuti jira rinobuda kumeso
Screen Curtain inongotendeuka kana VoiceOver yakavhurwa. Kana iwe usingashandise kana kuda VoiceOver, ndinokurudzira kuidzima zvakare kudzivirira Screen Curtain kutendeuka zvekare.
Kuti ubvise VoiceOver, dzokera kuWatch app pane yako iPhone uye tora Zvakajairika -> Kupinda -> VoiceOver . Wobva wadzima switch padivi peIzwiOver kumusoro kwechiso.
Wongorora Yako Apple Yekuchaja Cable
Kana yako Apple Watch isingavhurike, edza kuchira netambo dzakasiyana dzakasiyana dzemagineti uye majaja akati siyanei (chiteshi checomputer chako che USB, cheja yemadziro, nezvimwewo). Kana iwe ukaona kuti yako Apple Watch haisi kubhadharisa neimwe yakatarwa yekuchaja tambo kana charger, saka pane dambudziko neiyo tambo kana charger, kwete yako Apple Watch .
Kana paine nyaya neako Apple Watch yemagineti yekuchaja tambo, unogona kukwanisa kuitsivhara mahara kana yako Apple Watch yakafukidzwa neAppleCare +. Tora iri munzvimbo yako yeApple Chitoro uye uone kana vachizotsiva iwe.
chii chinonzi chitsotsi chingadaidze
Kana pasina kana tambo dzako dzekuchaja kana majaja ari kushanda, tarisa pane yangu chinyorwa pa zvekuita kana yako Apple Watch isingabhadharise.
Zvinogona Kuita Hardware Matambudziko
Kana yako Apple Watch ichiri kusashanduka, panogona kunge paine dambudziko rehardware rinokonzera dambudziko. Yakawanda nguva, Apple Watches inomira kutendeuka mushure mekudonhedzwa kana kuratidzwa kumvura.
Asi Ini Ndaifunga Yangu Apple Watch Yaive Isina Mvura?
Yako Apple Watch iri inodzivirira mvura , kwete zvachose isina mvura. Kunyangwe AppleCare + inovhara kusvika pazviitiko zviviri zvekukuvara netsaona, inogona kunge isingavhare kukuvara kwemvura. Hazvinyatso kujekesa kuti ndedzipi mhando dzekukuvara netsaona AppleCare inovhara iyo Apple Watch, asi zvivimbiso zvePhones usafukidze kukuvara kwemvura.
Kana iwe uchitenda kuti pane dambudziko rehardware neako Apple Watch, seta musangano kuApple Chitoro chako uye ita kuti vatarise.
Yako Apple Watch Iri Kuvhura!
Yako Apple Watch yadzoka uye iwe unogona kutanga kuishandisa zvakare. Inotevera nguva yako Apple Watch isingashanduke, iwe unobva waziva chaiyo yekugadzirisa dambudziko. Inzwa wakasununguka kusiya chero mamwe makomendi aunazvo nezve yako Apple Tarisa muchikamu chemashoko pazasi.